Vitsy mikitrana irery… | NewsMada
Vitsy mikitrana irery…
Fiteny mahazatra ny hoe: ny vy, tsy mikitrana irery. Ilazana ny ady, misy antony fa tsy tongatonga ho azy na mandeha irery io: matoa misy ady, misy ankolafiny roa mifanohitra sy mifanandrina ao. Fa mety misy ny hoe vitsy mikitrana irery: miady irery, mitabataba irery… Amin’izany, mety misy mpihaino na tsia.
Tsy karazan’ny vitsy mikitrana irery ve ny mpiray tanindrazana tratran’ny kere any atsimo? Vitsy, mitaha amin’ny vahoaka 22 tapitrisa manerana ny Nosy, hany ka tsy heno na tsy henoim-peo. Eo ny fitarainana noho ny haintany sy ny mosary efa ho lava, saika isan-taona. Mila vahaolana haingana sy maharitra.
Mbola vitsy mikitrana irery koa izay traboina noho ny orambe sy ny tondra-drano, saika isan-taona. Rehefa tsy takona afenina intsony ny loza, mivoaka haino amin-jery, vao mikoropaka ny tomponandrakitra isan-tsehatra sy isan’ambaratonga. Zary hetsika sy fisehoana politika ivelany ny raharaha, fa tsy tena famonjena?
Mbola vitsy mikitrana irery koa ireo mpivarotra amoron-dalana, Antananarivo Renivohitra? Ilaina ny fandaminana sy fanadiovana tanàna. Tsy afa-misaraka amin’izany ny fandaminana sy fanadiovana ny tontolo sosialin’ny mponina. Sanatria, andrasana hivadika zavatra hafa vao itadiavana vahaolana haingana sy maharitra?
Santionany ireo… Maro ny sehatra ahitana ny mponina mikitrana irery, tsy misy mpihaino na miraharaha. Noho ny tsy fandriampahalemana, ny tsy fisian’ny asa, ny halatra taolam-paty, ny kolikoly, ny fanamparam-pahefana… Raha tsy vaky bantsilana sy tsy takona afenina ary manohintohina fitondrana, tsy mampiraika.
Vitsy mikitrana irery na mikotrana irery amin’ny famahana olana ny mpitondra? Miady irery fa mbola tsy hita na tsy maharesy lahatra ny mpiara-miombon’antoka ny tany tan-dalàna, fanjakana tsara tantana, ady amin’ny kolikoly… Eo koa ny hoe: atokisan’ny vahoaka sy miara-mizaka sy miara-mihafy ny mafy aminy ve?
Samy mikitrana irery amin’izay misy azy avy, amin’izay mahamaika azy? Mahatonga ny fahasahiranana mihamafy sy mihalalina, tsy ahombiazana amin’izay atao…